Nagu saabsan | Lingshou Huajing Mica Co., Ltd.
Kusoo dhawow Huajing Mica
Lingshou Huajing Mica Co., Ltd., oo la aasaasay 1994, waxay leedahay taariikh 27 sano ilaa hadda ah. Waa shirkad wax soo saar u janjeedha oo inta badan lagu sameeyo farsamaynta farsamooyinka macdanta nonmetallic oo ay ku jiraan mica-ga dabiiciga ah, mica synthetic, macdanta shaqada iwm. taxanaha fasalka oo dhan. Shirkaddu waxay dejisay laba xarun cilmi-baaris iyo horumarineed oo ku yaal dhinacyo kala duwan, taas oo ah inay bixiso taageero farsamo oo xoog leh oo loogu talagalay wax soo saarka warshadaha iyo qalabka aasaasiga ah ee qurxinta. Kadib in ka badan 20 sano oo horumar isdaba-joog ah iyo hal-abuurnimo ah, Huajing waxaa la siiyay "National Tech-Enterprise Enterprise", "Hender New New Special Company" iyo shahaadooyin sharaf kale oo la xiriira. Huajing waxay u hogaansantaa wadada hal abuurka iyo horumarka, waxay u hogaansantaa caalamiyeynta calaamadeeda iyo jaangooynta wax soo saarkooda. Waxaa ka go'an inay dhisto "shirkad tiknoolajiyad farsamo sare leh oo faa'iido leh", oo leh qalab macdan oo tayo sare leh oo horseed u ah kobaca dhaqaalaha Shiinaha iyo adduunka.
Lingshou Huajing Mica Co., Ltd., oo la aasaasay 1994.
Lingshou Huajing Mica waxay leedahay taariikh 27 sano ilaa iyo hadda.
In ka badan 20 sano oo horumar joogto ah iyo hal-abuur.
Huajing wuxuu leeyahay koox xirfadlayaal ah oo leh ku dhowaad boqol xubnood, oo ay ka go'an tahay soo saarista iyo soo saarista wax soo saar tayo leh oo ka baxsan mica iyo waxyaabaha kale ee macdanta leh. Waxyaabahan sare ee macdanta qaaska ah, gaar ahaan kuwa ay ka midka yihiin waxyaabaha la isku qurxiyo ee dhamaadka-sare leh, caagagga injineernimada, rinjiga ka-hortagga qurxinta ilaalinta deegaanka, iyo walxaha khaaska ah ee alxanka, ayaa ku guuleystey kaalinta koowaad ee Huajing ee arjiga dalabka Shirkaddu waxay u hoggaansameysaa istiraatiijiyad horumarineed oo tayo sare leh oo waara oo waxay u qaadataa hal-abuurnimo cilmiyeed iyo farsamo ahaan tartan asaasi ah. Gaar ahaan sannadihii la soo dhaafay, waxay leedahay faa'iidooyinka teknoolojiyad hoggaamineed iyo khibrad wax ku ool ah oo ku saabsan soo saarista mica synthetic, adeegsiga macdanta shaqeyneysa, soo kabashada guud iyo ka faa'iideysiga kheyraadka heerka hoose iyo dhinacyada kale ee la xiriira.
Huajing waxay u hoggaansan tahay fikradda nidaamka maaraynta horumarsan. Maareynta wershedeedu waxay ahayd mid waafaqsan nidaamka ISO9001: 2015 nidaamka maaraynta tayada, ISO14001: 2015 nidaamka maaraynta deegaanka iyo OHSA18001: 2007 nidaamka shaqada caafimaadka iyo badbaadada shaqada. Iyada oo ay ugu wacan tahay hagaajinta joogtada ah ee heerarkeeda maamul iyo wax soo saar, Huajing waxay leedahay ku dhowaad 400 macaamiisha adduunka oo dhan, sida shirkadaha caanka ah ee gudaha ee caanka ah Kingfa Scince & Technology, Qalabka Cusub ee Oakley, iyo sidoo kale shirkadaha caalamiga ee caanka ah. sida Basf-ka Jarmalka, Kiimikada Japan Mitsubishi Chemical, Nippon Rinjiga, Kuuriya LG, Hyundai, iyo kiimikada Dow Dowladeed, iwm. Dhammaan ururada la soo sheegay waxay aasaaseen xiriir dheer oo xasilloon oo iskaashi lala yeesho shirkadeena.
Iyada oo leh xirfad, daacadnimo, ixtiraam, iyo hal-abuurnimo iyada oo ah caqiidadeeda, Huajing Mica waxay rajeyneysaa inay abuurto mustaqbal wanaagsan adiga oo leh aragtida ah inaad si joogto ah u wanaajiso una qanciso qiimaha alaabada macaamiisha.